ICorning yazisa ngeglasi yeGorilla 6, eyonaGlasi iQinisekileyo eyenziweyo | IPhone iindaba
ICorning yazisa ngeglasi yeGorilla 6, eyonaGlasi inamandla eyakhe yenziwa
Singatsho ukuba uCorning akadingi kwaziswa, inkampani ivelise iglasi ngokuchasene nokukrwela kunye nokubetha kangangeminyaka emininzi kwaye ikhathalogwe njengeyona ilungileyo kwicandelo layo. Kwiminyaka emininzi eyadlulayo bekukho intetho malunga nezahlulo phakathi kweCorning kunye neApple ukubandakanya ingxelo yokugqibela yekristal ehlala ikho kwi-iPhone yosuku, ngaphandle kwento yokuba olu lwazi kunqabile ukuba lwenziwe esidlangalaleni. Ngoku ICorning iveza iGorilla Glass 6, olona hlobo luchasene nolungazange lwenziwe kwaye lunokunyusa i-iPhone entsha ecwangciselwe ukuphela konyaka we-2018, uyathandabuza? Ezi ziimpawu ezenza ukuba ikhetheke kangaka.
Ngokwe- Upapasho ndaba zekhampani:
Ukuphucula ukugubungela iglasi, izazinzulu zaseCorning ziye zavelisa into entsha ngokupheleleyo enako ukusinda kumathontsi amaninzi. Kuvavanyo lwaselebhu, iGorilla Glass 6 iye yasinda kwishumi elinesihlanu leemitha ukuwa kuzo zonke iintlobo zomhlaba ongalunganga, oku kubonisa ukuphucuka kokuphindeka kabini kwenani lokuwa elalichasene neGorilla Glass 5 yenkampani yangaphambili.
Kucacile kuthi ukuba iGorilla Glass 6 iyamelana ngakumbi kunangaphambili, nangona kunjalo, iifowuni zeglasi ziyaqhubeka nokwaphuka ngokulula kunakuqala xa zisokola, ndingasathethi ke ukuba i-iPhone 8 kunye ne-iPhone X azibonisanga ukuba zisebenza kakuhle xa Kuza kukhuhla ukumelana. Okwangoku, phakathi kweApple kunye neCorning kusekho ukufihla malunga nezivumelwano zabo zorhwebo, kodwa iFixit kunye neengcali zicacile ngayo, ezo ziikristale zonyuswe yiApple zivela eCorning. Ngeli xesha singacinga ukuba i-iPhone entsha eza kuboniswa ngaphezulu nje kwenyanga izakunyusa ezi kristali zintsha zinganyangekiyo Zombini ngaphambili nangasemva ngoku ukuba iApple ibhejela ukutshaja ngaphandle kwamacingo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » ICorning yazisa ngeglasi yeGorilla 6, eyonaGlasi inamandla eyakhe yenziwa
Ngaba umbhali wenqaku uya kwazi ukuba ukuthi "azange kwenziwe" yimpazamo enkulu kwiisemantiki (kunye nengqiqo)? Into echanekileyo kukuthi "yeyona nto inqabileyo yenziwe" ukuza kuthi ga ngoku. "Ayizange yenziwa" ithetha nje, ukuba ayizange yenziwe. Mka!
Abantu baseCorning abayikholelwa. Beka izidenge kuyo!
Izenzo ezimbi zikaGoogle zibiza i-5.000 yezigidigidi zeedola
Ezi ziibugs ezintsha kwaye ezo zihamba kwi-iOS 12 beta 4